बिश्वका १५ सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरु , भ्रष्टाचार दिवस बिशेष | Hamro Patro
८अकंका साथ तर्थ कोरिया बिश्वकै सबैभन्दा भ्रष्ट देशको सूचीमा छ । हुन त तानाशाह शाषन रहेको यस देशमा भित्र के भइरहेको छ, बिश्वलाई केही भेउ छैन । तर अहिले पश्चिमा देशहरुका लागि नर्थ कोरिया फलामकै गाँस भएको छ । आणविक हातहतियारमा बढ्दो लगानीका कारण नर्थ कोरिया अर्थतन्त्र भित्रभित्रै जर्जर भएको र भ्रष्टाचार तानाशाह शाषकका कारणले झनै मौलाएको बताइन्छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिक दुगर्ती संगै हिँड्ने कदमहरु हुन। कुनै पनि देशका लागि भ्रष्टाचार जस्तो श्राप केही हुन सक्दैन्, जब भ्रष्टष्हरुको बिगबिगी सरकार, सत्ता र समाजमा हुन्छ तब तब नागरीक अधिकार अनि मानव अधिकारको हनन हुदै जान्छ । यसो हँदा हुनै पनि बिश्वका अधिकांश देशहरुमा भ्रष्टाचार हुनेगर्दछ अनि यसले राष्ट्रको क्षमतामा व्यापक असर गर्दछ ।
अझ दुर्भाग्यको कुरा त भ्रष्टहरुले सरकार अनि सदन लाई नै खरिद गरेर देश अनि न्याय नै मोडिदिने गर्दछन् । नेपालमा पनि यस्ता उदहारणहरुको कमी छैनन्, यदि लुटेराहरु नै बगैंचाको माली भएपछि फुल फुल्न त कहाँ पाउछन र ?
एक्ल पार्टी राष्ट्रपतीय शाषन प्रणाली रहेको यस देशमा भ्रष्टाचार अध्यन १८ पाइयो । साउदी अरब परतिरको रेड समुन्द्र किनारको यस देश पर्दछ । यस देशमा केवल ६३ लाख हाराहारीमा जनसख्या छ । १८ अकंको साथमा टप १५ मा यस देश १५औं नबंरमा छ ।
संघीय गणतान्त्रीक सिरियामा राष्ट्रपतीय शाषण व्यबस्था छ, भ्रष्टाचार दौडमा यो देश पनि १८ औं अकंका साथ छ । गृहयूद्धको चपेटामा रहेको यस देश अहिले झनै जरजर अवस्थामा छ, कहिले कसरी देशको बिकास अनि निकास हुने हो ? प्रश्नको उत्तर छैन ।
यस देश पनि माथिका दुई देश झैं १८ अकंका साथ उभिएको छ । ईरान, अफगानीस्तान, उज्वेकिस्तान अनि काजाकिस्तान लाई यस देशको सिमानाले छोएको छ । मध्यपूर्वको तनाव संगै यस देश पनि क्रमश खस्कँदै गएको हा। यस देशमा राष्ट्रपतीय एकात्मक सरकार छ ।
यो देशले पनि १८ नै अकं पाएको छ । ओमन र साउदी लाई छोएको यस देश नि गृहयूद्धको चपेटामा छ । केही दिनमात्र अघि यस देशका पूर्व राष्ट्रपतीलाई बिरोधीहरुले हत्या गरेर झनै देशको अस्थिरता झनै बढाएका छन् ।
१७ अकंका साथ यस देश ११औं स्थानमा छ । सन् २०१० को बिद्धशंकारी भुकम्प पछि यस देशको अर्थतन्त्र अनि व्यबस्था खल्बलिएको हो जुन अझै उठ्न सकेको छैन् ।
६ गिनीया बिसाउ
राष्ट्रपतीय अर्ध गणतान्त्रीक भनेर उल्लेख गरिएको यस देश पश्चिमी अफ्रिकाको सेनेगल छेउमा छ । १७ अकंका साथ हाइटी संगै भ्रष्ट तालिकामा उभिएको छ । यस देशको जन्म सन् १९७० मा भएको हो ।
१७ अकंका साथ यस देश दर्दनाक अवस्थामा छ । यस देशको मुद्राको लगभग मुल्य छैन भने पनि हुन्छ।
१६ अकंका साथ एसियाली देश इराक उभिएको छ । प्राकृतीक सम्पदा धेरै भएकाले पनि ईराकलाई शदियौं देखि बिकसीत देशले आक्रमणको केन्द्र बनाएका हुन् । सद्धाम हुसैनको अन्त्य संगै अमेरिकी टोली फर्किएपछि ईराक लगभग शाषन शुन्यतामै पुगेको पनि हो । तेलको खानी हुँदा हुदै पनि ईराकको अर्थतन्त्र धराशायी छ ।
अकं १६ का साथ लिविया भ्रष्टाचारको झनै नजिकको देशमा पर्दछ, पुरानो सरकारका समर्थक अनि नयाँ उग्रवादीहरु बीच दिनै झडप हुनेगर्दछ । भ्रष्टाचारको सूच्ीमा लिविया १६ अकंकका साथ भ्रष्टपनाको झनै नजिक देखिएको छ ।
यस गणतान्त्रीक देश १५ अकंका साथ झनै भ्रष्ट देशको सूचीमा परेको छ । अफ्रिकाको पश्चिमी किनारमा भएको यो देशमा पनि तेलको व्यापक खानी हुँदाहुँदै पनि गरिबी र भ्रष्टाचारको सिमा अधिकतम देखिन्छ ।
११ साउथ सुडान
सन् २०११ मा औपचारीक रुपमा स्वतन्त्र घोषणा गरिएको यो देश पनि १५ अकंका साथ अंगोला बरावरी मा छ । यस देशका २०० बढि समुदायका मान्छेमा देशको माया र राष्ट्रियता फिटिक्कै नभएको अध्यनले बताएको छ ।
१२ अकंका साथ सुडान भ्रष्टचारीको अखडा देश भएको छ । यस देशले तेल खानीहरुको सही उपयोग गर्न सकेको छैन भनें साउथ सुडान आफूवाट छुटिएपछि झनै आर्थिक दुगर्ती भोगेको छ ।
११ अकंका साथ अफगानीस्तान बिश्वका अत्यन्त भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा टप ५ भित्र परेको छ ।
गृहयूद्ध, आतंकवाद अनि भ्रष्टाचारले यस देशलाई धेरै नै गाँजेको छ ।
अब पालो बिश्वका दुईवटा अत्यन्त भ्रष्ट देशहरुको , आउनुहोस समान अकंका साथ भ्रष्ट सूचीका मुख्य देशहरु यसप्रकार छन् ।
१४ नर्थ कोरिया
८ अकंका साथ सोमालिया पनि बिश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देशमा परेको छ । शासन व्यबस्था लगभग कुनै संरचनामा नभएको यस देशमा केवल कूल जनसख्याँको २९ प्रतिशत मात्र जीवनमा एकफेर बिधालय जाने गर्दछन् ।
नेपाल भने यस सूचीमा १३१ औं छ । भ्रष्टाचार सबैतिर अन्त्य होस् । जय होस्